ဆရာကြီး ပြောမယ်... | မိုးချိုသင်း မှတ်တမ်း
Wow, today I am the first one:)
It was really good article.Keep it up dear, always support you .
very pleased to read ur new post earlier.
စာတွေဖတ်ပြီး ရယ်လိုက်ရတာ။ ကျနော်လည်း အဲသလို အတွေ့အကြုံမျိုးတွေ ရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် ပေါ်အောင် မရေးတတ်ဘူး။ ဇာတ်သဘင်ပညာမှာ ဟာသပညာက အခက်ဆုံးလို့ ကြားဖူးတယ်။ စာပေမှာလည်း ဒီလိုပဲနဲ့တူတယ်။
August 24, 2008 at 4:54 AM
ဟုတ်တယ်အစ်မ၊ အဲဒါမျိုး ခဏခဏကြားဖူးတယ်၊ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်လည်း ပျဉ်းမနားကို သူ့အမေနဲ့သွားတာ၊ ဘူတာနားက တည်းခိုခန်းနီးနီးလေးကို အကြာကြီးပတ်နင်းပေးတယ်၊ သူကတော့ဒေါသတွေထွက်လို့၊ သူ့အမေကတော့ သမီးရယ် သူလည်း သူ့ဝီရိယစိုက်ထုတ်ပြီးမှ ဒီပိုက်ဆံရတာပါတဲ့၊
သွားမေးတယ်။ ဆရာကပြောတယ်။ ခင်ဗျားယောင်္ကျားကထောင်ထောင်မောင်းမောင်းနဲ့အနာဂတ်ကိုရည်ရွယ်ချက်ကြီးကြီးထားတယ်လို့ဟောတယ်။
ပေါင်ပြီးရိုက်ခဲ့လို့ပြဿနာတက်လာတာ။အသားကလည်းညိုပြီးခပ်သေးသေးရယ်။ အဒေါ်က “ ရှင်ကကျမကိုလာနောက
------ ဆိုတော့--(၃) ခုလောက်ကမောက်ကမတွေဟောအပြီး ဗေဒင်ဆရာက “ယျတယာချေရမယ်၊ အမှောင့်ပယောဂတွေဝင်နေတယ်” ဝင်နေတယ်ဆိုတော့“ဟုတ်တယ်.ခုထိကိုဝင်နေတာ” ဆိုပြီးဗေးဒင်ဟောမပေးပဲ စားပွဲခင်းဆွဲပြီးမှောက်လိုက်တာ၊ ပြဿနာတက်တော့တာပဲ။ အင်း ခင်ဗျားတို့ကတော်ပါသေးတယ်။ ရယ်စရာအဖြစ်ပြန်ပြောလို့ရသေးတယ်။ အဒေါ်ကတော့ ဗေဒင်ဆရာရဲ့သမီးတွေနဲ့ဆက်ရန်ဖြစ်နေရတယ်။
August 24, 2008 at 10:38 PM
အမရေ ...ဒီဘလော့လိပ်စာလေးကို Myanmarblogger societyကရပြီး အမပဲဖြစ်မှာပဲဆိုပြီး ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ ဥာဏ်မိုးရဲ့ သူငယ်ချင်းပါခင်ဗျာ အမမှတ်မိမလားတော့မသိဘူး။
ဟင် အမတို့က အရမ်းအားနာတတ်တာကိုး ။ ညီမသာဆို အဲလို ဗေဒင်ဆရာကို ကိုအောင်မိုးဝင်းအဒေါ် လုပ်သလို ၊ စားပွဲကို မှောက်ပြီး ထားခဲ့ဦးမှာ အဟီး ။
ရောက်ပြန်တော့လည်း စွဲမက်ဖွယ် အရေးသားတွေနဲ့
ပျော်စရာ အမှတ်တရလေးတွေ ဝေမျှပေးတာ ကျေးဇူးပါ မ ရေ… ၁၉၉၆ဆိုတော့ အိမ်ထောင်သက်တမ်း ၁၂နှစ်တောင် ရှိပြီပေါ့…
အမ ရေးဘူးတဲ့ "လှောင်အိမ်ထဲက ငှက်ကလေး" (နာမည်တော့ အတိအကျ မမှတ်မိတော့ပါ) ဆိုတဲ့ ၀တ်ထု တိုရှိသေးလား၊ ဆရာ အထဲရောက်နေတုန်း အမ ဆရာ့ကို ရည်ရွယ်ပြီး ရေးထားတာ ထင်ပါတယ်။ တော်တော် တော့ကြာပြီ။ ကျွန်တော် ပြန်ဖတ်ချင်လို့ ရှိသေးရင် တင်ပေးပါလား။